Barcad badeed soomaaliyeed oo lugu laayey biyaha soomaaliya ee badweynta hindiya – Soomaali 24 Media Network
Barcad badeed soomaaliyeed oo lugu laayey biyaha soomaaliya ee badweynta hindiya
Dhallinyaro burcad badeeda oo ka baxay xeebaha gobolka mudug oo badweynta hindiya kasoo af-duubtay doon kalluumaysi ayaa xilli ay kula soo wajahnaayeen mid ka mida marsooyinka xeebaha soomaaliya waxaa weeraray ciidama NATO.
Dhallinyaradaan oo soo qafaashey doon ka mida doomaha badda soomaaliya sida sharci darradaa uga kalluumaysta dhibaatooyinka xoogganna ku badmaaxiinta soomaalidaa ayaa lugu laayey gudaha badda soomaaliya.
ka dib af-duubka doonta ayey ciidamada NATO lasoo xiriireen dowladda soomaaliya kuma wargaliyeen in burcad badeed soomaaliyihi qafaalatay doon kalluumaysi.
sida warar aan la xaqiijini nugu soo gaarayaanna madaxweynaha soomaaliya Maxamed cabdullaahi Farmaajo ayaa ufasaxay markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada NATO, inuu tillaabo ka qaado burcadda.
ilaa iyo hadda waxaa la xaqiiyey in ay ciidamada NATO burcadda qaarkood laayeen qaar kale dhaawac ku qaateen halka qayb ka midihi ay kasoo baxsadeen oo ay galabta kasoo degeen xeebeed dhaca bariga gobolka mudug.
Previous Kenya oo xudduuda soomaaliya gudaha usoo gashay 476 KM
Next Maraykanka oo muwaadiniintiisa ugu digey inay u safraan wadamo ay ku jirto somalia.